IKiribati iya kucela umngeni kwimbono yakho ngobomi: Ukuvula kwakhona uKhenketho ngoJanuwari
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » IKiribati iya kucela umngeni kwimbono yakho ngobomi: Ukuvula kwakhona uKhenketho ngoJanuwari
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba eziseKiribati • iindaba • abantu • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Kukuma-700 eemayile kufutshane neHonolulu ukuya kwiRiphabhlikhi yaseKiribati, kunokuba ubhabhe uye eLos Angeles okanye eSan Francisco.
I-Kiribati sesinye seziqithi esaziwa kakhulu, kunye negugu elingafumanekiyo kuKhenketho lwase Mzantsi Pacific.
IKiribati, ngokusemthethweni yiRiphabhlikhi yaseKiribati, sisizwe esizimeleyo esiqithini kuLwandlekazi lwePasifiki.
Abemi abasisigxina bangaphezulu kwe-119,000, ngaphezulu kwesiqingatha sabo bahlala kwisiqithi saseTarawa. Urhulumente unee-atoll ezingama-32 kunye nesiqithi esinye esine-coral, iBanab
Igunya lezoKhenketho laseKiribati (TAK) lisamkele isibhengezo izolo ngu-Te Beretitenti, oHloniphekileyo u-Taneti Maamau ngesigqibo sikarhulumente wakhe sokuvula imida yesizwe yase-Kiribati ukusukela nge-Januwari ka-2022.
I-Kiribati yeyabahambi-abo banomdla wokuphanda kunye nokufumanisa, abantu abathanda i-adventure kwindlela yabakhenkethi ukuya kwiindawo apho babembalwa khona ngaphambili, kunye nabantu abafuna ukuqonda ilizwe-hayi nje ukulibona.
I-Kiribati ibhengeze ngoJulayi, yayigcina imida yayo ivaliwe.
I-Kiribati iya kucela umngeni kwimbono yakho malunga nendlela obufanele ukuba ubomi bube ngayo kwaye ikubonise indlela enzima kakhulu yokuphila apho usapho kunye noluntu luza kuqala.
Ime kwi-equatorial Pacific Ocean, empuma yeKiribati ibonelela ngokuloba okumgangatho wehlabathi (zombini umdlalo kunye nokuloba kwamathambo) ovela kwisiqithi saseKiritimati. Ngasentshona liQela laseGilbert leziqithi, elinika amava amangalisayo nahlukileyo kwinkcubeko.
Idolophu enkulu yelizwe iTarawa ineendawo ezinembali kunye nezinto zobugcisa apho elinye lamadabi anegazi kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi, iDabi laseTarawa.
Ukuba undwendwela njengenxalenye yomsebenzi wakho, singakukhuthaza ukuba hlola iKiribati ukufumana olu lonwabo - uMzantsi Tarawa akufuneki ube kuphela kweAtoll oyindwendwelayo xa unama-33 onokukhetha kuwo, nkqu neNorth Tarawa ekufutshane inikezela umbono ohluke kakhulu!
Kwisibhengezo sakhe, uMongameli Maamau ukhuthaze abantu baseKiribati abakulungeleyo ukufumana iyeza lokugonya i-COVID-19 ukuba bagqibezele idosi zabo phambi kokuphela konyaka. Ucacisile ukuba umanyano kunye nokuthobela izithintelo kunye nemigaqo kubaluleke kakhulu kukhuseleko lwayo yonke i-Kiribati.
UMongameli ucele abantu abadala kunye nemibutho yabasetyhini, amaqela ecawe, amaqela olutsha, imibutho yabasetyhini, amaBhunga eziQithi, uluntu kunye nootata kunye noomama kwikhaya ngalinye ukunceda ukukhuthaza amalungu osapho kunye nabahlobo ukuba bagonyelwe le ntsholongwane iyingozi.
Ngenkqubo yokuQalisa ukuKhenketha, i-TAK iphuhlise iiNkqubo zaseKiribati zoKhenketho kunye neziNdwendwe zeNdlela eNtsha eNtsha kwaye ngoku ithatha uqeqesho lomgaqo wokhuseleko we-COVID-19 kubo bonke ababoneleli ngendawo yokuhlala.
Iipropathi zoMazantsi eTarawa, North Tarawa, Abaiang, Tab North naseTab South balugqibile uqeqesho lwabo ngelixa abanye ababoneleli beenkonzo zokuhlala kunye nabakhenkethi kwezinye iziqithi beza kufumana uqeqesho lwe-COVID-19 protocol ngoNovemba 2021. Umphathi weTAK, uPetero Manufolau uqinisekisile. ukuba uqeqesho lokuhlaziya ngokubanzi luza kuqhutywa ngoDisemba 2021, ngaphambi kokuvulwa komda ngoJanuwari 2022.
Njengenxalenye yenkqubo yokuqalisa kwakhona, i-TAK iyakuphehlelela ngeQhinga layo lokuThengisa ngeDijithali ngoSeptemba ukuze liphumeze ukusuka ngo-Okthobha u-2021, inika isiQithi sePacific iinyanga ezi-3 zokuqalisa amaphulo kunye neenkqubo zentengiso.
Abahambi ababuya okanye abatyelele eKiribati okokuqala ngo-2022 banokulindela amava aphuculweyo ngenkqubo ye-Mauri Mark, indawo yovavanyo ehotele, kunye nenkqubo yokuvunywa, kunye neMauri Way, inkqubo yeNkonzo yoThengi yoKhenketho yeSizwe kubo bonke ababoneleli beenkonzo zokhenketho.
Iinkcukacha ngeemfuno zabahambi ze-COVID-19 zaseKiribati kunye neeprotokholi zokuvulwa komda wamazwe ngamazwe ngoJanuwari 2022 ziya kucetyiswa xa sele ifumanekile kurhulumente.